Date My Pet » 6 Antony To Ataovy Down ny Cell Phone
Ianao avy nipetraka teo ampitan 'ny zazavavy, na lehilahy ny nofy nandritra ny sakafo hariva candlelit amin'ny toerana vaovao hippest amin'ny tanàna. Ny zava-drehetra dia nikodiadia miaraka amin'ny tantaram-pitiavana royally fomba mandra-telefaonina manomboka nitsoka ny amin'ny andinin-teny avy amin'ny namana, vavy ary na dia Neny - mangataka ny fomba rehetra mitranga, na raha Izy no "iray." Manana safidy roa: Fahanginana ny Ringer, hametraka ny telefaonina izy, ary tsy miraharaha izany mandra-ny daty Tapitra na hainao ny mamaly hafatra tsirairay izany avy. Raha misafidy ny aoriana mihazakazaka ianao ny mety tsy manimba ny daty, fa azo atao koa ny mety ny ho avy izany fitiavana amin'ny olona tezitra izao-.
Nahoana ianao no tokony hametraka ny finday teo nandritra ny daty, ary ahoana no hanao izany ambony ny vintana ho avy fahombiazana? Mba jereo kely enina antony variana mampiaraka dia fifandraisana ender sy ny zavatra azonareo atao mba hampiala ny teknolojia-feno fitiavana ny fiainana manodidina.
Fanaovana azy ianao mahatsapa ho toy ny tsy manan-danja dia ny tanteraka. Raha tsy misy ny loza toy ny vonjy taitra fianakaviana akaiky Efa nentina tany amin'ny hopitaly, na ny lehibeny dia nandrahona ny afo anareo, raha tsy miverina ny mailaka, misy antony kely mba hamily ny saina avy amin'ny daty ny finday. Raha tokony nibanjina fotsiny ny varavarana lamba fa tsy ny daty ny tavanao ny hariva manontolo, hametraka ny telefaonina izy, ary hanome azy ny saina tanteraka.
Mety hieritreritra izy fotsiny ianao fa tsy ho ao an-. Eritrereto hoe ianao amin'ny daty amin'ny olona iray izay tena mety fa tsy hiresaka intsony. Inona no hataonao? Raha ny valin-mianjera any ho any akaikin'ny "tsy handoa azy ny saina" Sokajy - izany indrindra no manao ianao rehefa dia variana daty. Na dia ianao mandefa SMS ny tsara indrindra raha ny marina fa ny daty kiboriny dia Über-mahagaga, Mety ho izy ny zavatra toy ny midika fa ianao dia manana tombontsoa aotra tao amin'ny.
Jerenao ratsy. Inona no dreninao momba ny mahantra fomba? Fa ianao mody amin'ny fianakaviana iray sakafo hariva, ary eritrereto ny latabatra araka ny tokony etiquette. Na raha tsy marina Miss Fomba 100 isan-jato ny fotoana, izany no olona hatao fa tokony hanaraka.
Resaka dia roa-dalana eny an-dalana. Ny daty vitsivitsy voalohany dia manome ny fotoana sy ny mpiara-miasa vaovao ny mety dia vao mifankahalala tsirairay. Sady nanopy maso tsy tapaka any am-efitra, mamaly ny mailaka na mandefa SMS ny namana mametraka ny barazy lehibe rehefa resaka ny velona izay tokony ho nitranga marina eo anatrehanao. Manontania tena hoe, raha nilaza ny BFF fa ny daty no "tena mahafatifaty", satria itondrany ny beagle tahaka izany ny zaza raha ny marina dia tsara noho ny miresaka aminy momba ny fitiavana ny biby.
Ianao fanaovana ny tsy-ka-tsara fahatsapana voalohany. Dobo ny mampiaraka tonga hatraiza hatraiza, ary misy hatrany trondro hafa mba haka ny toerana. Ny fanaovana ny mahantra vokany daty voalohany dia azo inoana fa ny mandoko ny mety ho mpiara-miasa ny heviny amin'ny hoe iza ianao, ary raha toa ka hivoaka miaraka aminareo eto indray. Dia izy hilaza amiko hoe "eny" amin'ny daty faharoa rehefa avy mijery laninao 30 avy amin'ny 45 minitra sakafo hariva ny SMS? Fa tsy mety.
Fifandraisana dia atao amin'ny olona, fa tsy ny teknolojia. Raha mety ho nihaona aterineto sady voalohany "niresaka" amin'ny alalan'ny lahatsoratra, mba hanao ny tena fitiavana fifandraisana ilainao-tena olombelona ny fifandraisana-olombelona. Maka ny finday ihany koa ny manome maimaim-poana ny daty fanjakana mba hanao toy izany koa. Miresaka amin'ny hafa ny olona mandritra ny daty manembantsembana anao tsy hanao ny fifandraisana amin'ny hafa.